Ụlọ ọrụ nyocha China na ndị na-emepụta ihe |Kaz
Mgbe a na-eresị bọọdụ sekit, na-enyocha ma bọọdụ sekit ọ̀ pụrụ ịrụ ọrụ nke ọma, ọ naghị enyekarị bọọdụ sekit ike ozugbo, kama soro usoro ndị a.
1. Ma njikọ ahụ ziri ezi.
2. Ma ọkụ eletrik dị mkpụmkpụ.
3. Nwụnye ọnọdụ nke components.
4. Mee ụzọ oghe na ule sekit dị mkpirikpiiji hụ na a ga-enwe obere sekit mgbeike na.Enwere ike ịmalite ule ike na naanị mgbe nyocha ngwaike dị n'elutupu ike-on emecha.
Ndị ọzọ na-arụ ọrụ na eletrọnịkị sekit debugging
1. Kpebie ebe ule
2. Tọọ ebe ọrụ nbibi
3. Họrọ ihe eji atụ ihe
4. Usoro nbipu
5. Nchọpụta n'ozuzu
1. Ike-na chọpụtara
3. Ndozi dị ike
N'oge usoro nbipu, ọ dị mkpa iji nlezianya na-ekiri na nyochaa ihe ngosi nnwale ma mee ndekọ iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe na ntụkwasị obi nke data nyocha.
Ihe ndị chọrọ nlebara anya na nbipu sekit
Ma nsonaazụ nzigharị ọ bụ eziokwu na-emetụta nke ukwuu ma olu ule ọ̀ ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị yana izi ezi ule.Iji hụ na nsonaazụ ule ahụ, a ga-ebelata njehie ule na ule ahụ
Iji nwalee izi ezi, ị ga-aṅa ntị na isi ihe ndị a:
1. Jiri njedebe ala nke ngwá ọrụ nyocha nke ọma
2. Ntinye ntinye nke ngwa eji elele voltaji ga-abụrịrị nke ukwuu karịa nha nhata nke ebe a tụrụ.
3. bandwidth nke ngwá ọrụ ule ga-adịrịrị karịa bandwit nke sekit n'okpuru ule.
4. Họrọ ebe ule nke ọma
5. Usoro nha kwesịrị ịdị mma ma kwe omume
6. N'ime usoro nbipu, ọ bụghị naanị na a ga-eji nlezianya lelee ma tụọ ya, kamakwa ọ dị mma na ndekọ
Nchọpụta nsogbu n'oge nbipu
Chọọ nke ọma ihe kpatara mmejọ ahụ, ewepụkwala ahịrị ahụ wee wụnye ya ozugbo enweghị ike idozi nsogbu ahụ.N'ihi na ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu na ụkpụrụ, ọ gaghị edozi ọbụna ma ọ bụrụ na ị reinstall
1. Usoro izugbe nke nyocha mmejọ
2. Ihe ọdịda ọdịda na ihe kpatara ọdịda
1) Ihe na-emekarị ọdịda: sekit amplifying enweghị mgbama ntinye kama ọkpụpụta waveform
2) Ihe kpatara ọdịda: ngwaahịa emechara na-ada ada mgbe oge ejiri ya, nke nwere ike ịbụ n'ihi mmebi nke ihe ndị ahụ, obere sekit ma ọ bụ oghere na-emeghe na njikọ, ma ọ bụ mgbanwe ọnọdụ, wdg.
3. Usoro izugbe iji lelee ọdịda
1) Usoro nlele anya: Lelee ma nhọrọ na ojiji nke ngwa ahụ ziri ezi, ma ọkwa voltaji ọkụ na polarity na-emezu ihe achọrọ;ma a na-ejikọta pinki akụkụ polarity nke ọma,
Ma enwere njikọ na-ezighi ezi, njikọ efu ma ọ bụ nkukota otu.Ma wiring nwere ezi uche;ma bọọdụ e biri ebi dị mkpụmkpụ-circuited, ma resistors na capacitors na-ere ọkụ ma ọ bụ gbawara.Akụrụngwa nleba anya nwere
Ọ dịghị ọkụ, ise siga, nsure ọkụ nke transformer, ma filament nke electron tube na oscilloscope tube dị, ma e nwere nnukwu voltaji mgbanye, wdg.
2) Lelee ebe a na-arụ ọrụ static na multimeter: usoro ọkụ eletrik nke sekit eletriki, ọnọdụ DC nke transistor semiconductor na ngọngọ jikọtara (gụnyere akụrụngwa, ntụtụ ngwaọrụ, voltaji ike), uru nguzogide na sekit, wdg. Enwere ike iji multimeter tụọ ya.Mgbe ọnụ ahịa a tụrụ atụ dị iche na nke nkịtị, enwere ike ịchọta mmejọ ahụ mgbe nyochachara.
Site n'ụzọ, a pụkwara iji oscilloscope "DC" tụọ ebe arụ ọrụ static.Uru nke iji oscilloscope bụ na nguzogide dị n'ime ya dị elu, na ọnọdụ DC na-arụ ọrụ na ụda mgbaàmà na ebe a na-atụ ihe na mgbaàmà nnyonye anya ga-ekwe omume na voltaji mkpọtụ na-eme ka nyocha dị njọ.
3) Usoro nchọta akara: Maka sekit dị mgbagwoju anya dị iche iche, enwere ike ijikọ mgbaàmà nke ụfọdụ njupụta na ugboro kwesịrị ekwesị na njedebe ntinye (dịka ọmụmaatụ, maka ihe nrịbama ọtụtụ ọkwa.
Nke gara aga: SMT- Mgbakọ
Osote: Mgbakọ Metro PCB DIP
Mgbakọ Metro PCB DIP